Lorcaserin - Warshad soo saare wax soo saare
Lorcaserin hydrochloride budada
CMOAPI waxay leedahay agab buuxa oo ceyriin ah oo ah nooca loo yaqaan 'lorcaserin', waxayna leedahay nidaam maarayn tayo wadarta ah.
Muujinaya 1-3 ee natiijooyinka 6
Kala soocida Default Sort by caan Sort rating celcelis by Kala soocaan ugu dambeyn Sort by qiimaha: hooseeyo si ay sare Sort by qiimaha: sare si ay u hooseeya
Waa maxay Lorcaserin?
Lorcaserin (Belviq) waa wakiil ka hortagga cayilka. Haddii aad u taagan tahay inaad ruxdo culeyska jirka ee dheeriga ah adigoon ku mashquulin jimicsiga daalka badan, halkan waa waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan iibsan daroogada serotonergic.
Lorcaserin hydrochloride waxaa soo saaray Arena Pharmaceuticals. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa loo isticmaali jiray sidii daaweyn muddo dheer ah ee buurnida. Dheeraadku wuxuu xakameynayaa rabitaanka cuntada isagoo kordhinaya dhereg. Ka sokow, waxtarka lorcaserin uma baahna inaad raacdo xoogaa cunto adag ama jimicsi joogto ah.
Tan iyo markii la aasaasay, daroogadu waxay soo martay tijaabooyin fara badan oo horudhac ah iyo daraasaadka aadanaha si loo hubiyo waxtarkeeda iyo u dulqaadashada daaweynta buurnida. Sannadkii 2012, FDA waxay oggolaatay lorcaserin (Belviq) adeegsiga daweynta laakiin waxay ku hoos jirtaa tallaabooyin adag. Tusaale ahaan, warqadda daawada laguu qoro oo keliya ayaa loo heli karaa dadka waaweyn ee cayilan iyo kuwa aad u cayilan ee leh cudurro isku-dheelitiran oo miisaanka la xiriira sida dhiig-kar, sonkorow, iyo dyslipidemia.
Waxaa jira laba magac caan lorcaserin, oo ah, Belviq iyo Belviq XR. Labadooduba way isku dhowyihiin, waxay leeyihiin lorcaserin hydrochloride oo ah maaddada firfircoon.
Kaabsoosha Belviq waa yar yaryihiin, qiyaasta daawaduna waxay u qaybsan tahay laba qof maalintii. Contrariwise Belviq XR kaabsoosha way ka weyn yihiin. Magaca magacan lorcaserin wuxuu leeyahay kiniinno fidsan oo la sii daayay oo la qaadayo hal mar maalintii.
Lorcaserin iyo Lorcaserin Intermediates
Dhismahan waxaa badanaa loo yaqaan 'lorcaserin hydrochloride'. Si kastaba ha noqotee, magaceeda sayniska waa 8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine Hydrochloride (CAS: 1431697-94-7).
Budada Racemic Chlorocaserin Hydrochloride waxay ka dhalataa isku darka kala-goynta chlorocaserin hydrochloride iyo lev-rotatory chlorocaserin hydrochloride. Dhexdhexaadinta 'lorcaserin intermediate' waxaa loo isticmaalaa daraasadda iyo diyaarinta daroogada miisaanka-lumisa ee suuragalka ah.
Maaddada waxaa loo yaqaan (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride (CAS no: 846589-98-8). Si kastaba ha noqotee, marka la eego shuruudaha, waa (R) lorcaserin hydrochloride.
Dhexdhexaadinta lorcaserin waa alaab ceeriin ah oo falanqeyn ah oo loogu talagalay barashada astaamaha dawooyinka dawooyinka miisaanka luminta. Daraasadaha horudhaca ah ee jiirka, xarunta ayaa soo bandhigeysa saameyn aan caadi ahayn. Ka sokow, waxay sidoo kale yareyneysaa qaadashada xanuunka iyo maandooriyaha sida kafeyn, amphetamine, iyo daroogooyinka la xiriira.
Casseroole Cagaaran Midig
Cilmiyan ahaan, kani waa (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine oo leh CAS no. 616202-92-7.
Mashiinka cagaaran ee gacanta midig loo haysto ayaa loo heli karaa sababo gorfeyn iyo daraasad awgood. Maaddadu waxay si xushmad leh u garaacaysaa 5-HT2C soo-dhoweeyeyaasha, markaa, waxay faa'iido u leedahay baaritaanka daawooyinka cunnada-xakameynaya.
Dhismahan waxaa kale loo yaqaan lorcaserin hydrochloride hemihydrate. Aqoonsigeeda saynis waa (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride hemihydrate (CAS: 856681-05-5).
Dextrorotatory Chlorocaserin Hydrochloride waa shey cayriin oo loogu talagalay isku-darka lorcaserin.
Saldhigga Bilaashka ah ee Racemic Chlorocaserin
Magaceeda kiimikada waa 8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine (CAS maya: 616201-80-0).
Saldhigga Bilaashka ah ee Racemic Chlorocaserin waa wax soo saar heer-dawooyin ah oo loogu talagalay cilmi baarista iyo falanqaynta sayniska.
Kaarka Cagaaran ee Serin Dhexe
Magaceeda sayniska waa 1 - [[2- (4-Chlorophenyl) ethyl] amino] -2-chloropropane hydrochloride (CAS no: 953789-37-2). Kaarka Cagaarka ah ee 'Green Card Serin' sidoo kale waa dhexdhexaad ka mid ah diyaarinta dheecaanka 'lorcaserin supplement'.
Waa inaad ogaataa in dhammaan kuwan dhexdhexaadiyeyaasha 'lorcaserin' kaliya loogu talagalay ujeedo cilmi baaris ah. Xeryahu kuma habboona in dad ama xayawaan la cuno.
Sidee ayuu Lorcaserin u shaqeeyaa?
Lorcaserin (Belviq) wuxuu bartilmaameedsanayaa Nidaamka neerfaha ee bartamaha isagoo la falgalaya qaboojiyeyaasha hypothalamic gaar ah. Waxay ku shaqeysaa iyadoo ku dhaqaajineysa serotonin 2C (5-HT2C) oo ku saabsan pro-opiomelanocortin neurons. Qeybtan maskaxda ka mid ah waxay gacan ku leedahay rabitaanka cuntada iyo caadooyinka quudinta. In kasta oo ay jiraan noocyo kale oo soo-dhoweeyeyaal ah sida 5-HT2A iyo 5-HT2B, haddana daroogadani waxay leedahay isugeynta ugu sareysa ee 5-HT2C.
Kordhinta culeyska Lorcaserin waxay kicineysaa 5-HT2C soo-dhoweeyeyaasha, markaa, waxay keeneysaa muujinta hormoonnada alfa-MSH. Alpha-MSH wuxuu ku shaqeeyaa melanocortin-4-receptors, taas oo u dirta calaamadaha maskaxda inaad buuxdo.
Hantida agonistic ee lorcaserin oo leh 5-HT2C soo-dhoweynta waxay kordhisaa dhereg, markaa, yareynta qaadashada cuntada iyo dardargelinta miisaanka oo yaraada. Sida laga soo xigtay mala-awaalayaasha sayniska qaarkood, dawadan serotonergic waxay wax ka bedeshaa heerarka leptin, hormoon door ka ciyaara miisaanka oo yaraada. Ku darsiga isticmaalka dheeraadka ah ee wakiilka ka hortagga buurnida ayaa ah inaysan ka soo bixin cudurka wadnaha. Sababta ayaa ah inay ku yartahay dhibaatada 5-HT2B.
Faa'iidooyinka Lorcaserin iyo Saamaynta Side
Qaadashada lorcaserin hydrochloride waxay kordhisaa dareenka dhereg. Waxay ka caawisaa cilladaha cunnada, sida kuwa ku badan dadka shucuurta iyo cunnada badan. Marka loo eego tijaabooyinka guuleysta lorcaserin, mid ayaa lumin kara ugu yaraan 5% culeyska jirkooda toddobaadyada 12.
In kasta oo ay dhif tahay, luminta wax ka yar 5% ee miisaankaaga inta aad ku jirto 'lorcaserin' macnaheedu waa inaadan waligaa gaarin natiijo waxtar leh xitaa haddii lagu daaweeyo muddada-dheer. Waqtigan xaadirka ah, cilmi baarayaashu waxay kugula talinayaan inaad joojiso maamulida kaabista miisaanka.
Isticmaalidda wakiilkan serotonergic-ka ayaa shaki la'aan kicin doonta habka dufanka gubanaya. Si kastaba ha noqotee, waa inaad ku dartaa waxqabadyo jireed qaar adoo u hoggaansamaya cuntada kalooriga ku yar. Ka sokow, waxtarka lorcaserin ee maaraynta miisaanka wuxuu ku xiran yahay maamulka joogtada ah. Joojinta qiyaasta waxay saameyn xun ku yeelan kartaa natiijooyinka.
Maareynta miisaanka ka sokow, lorcaserin sidoo kale wuxuu ku shaqeeyaa isagoo hoos u dhigaya xad-dhaafka dopamine ee ka jawaab celinta daroogooyinka qaarkood sida kafeyn, morphine, codeine, ama amphetamines. Dhibaatooyinka foosha xun ee kaabista ku leh soo-saareyaasha serotonin ayaa ka dhigaya mid ku habboon maaraynta cudurada maskaxda.
Sida laga soo xigtay saynisyahannada, lorcaserin ayaa sidoo kale yareyn kara astaamaha shisoofrani maadaama ay yareynayso sii deynta dopamine.
Waxyaabaha kale ee saameynaya
Dhabar ama muruq xanuun
Kaadida oo soo noqnoqota oo dhib badan
afka oo qalala
Aragtida isbeddelka sida cilladda
In kabadan kalabar calaamadaha taban ee lorcaserin HCl waxaa sabab u ah xad dhaaf. Waad ka gudbi kartaa waxyeelada lorcaserin adoo ku dhegan taxaddarka daroogada. Tusaale ahaan, waa inaadan dhaafin qiyaasta qiyaasta maalinlaha ah. Xaalada xad dhaafka ah, hubi inaad raadsato talo caafimaad. Dareen-celinta qaar ka mid ah si loo hubiyo waxaa ka mid ah riyooyin, isbeddellada niyadda, calool xanuun, wadno-garaac aan caadi ahayn, iyo wareer.
Kahor intaadan maamulin dheecaanka lorcaserin HCl, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso waxyaabaha soosocda ee soo socda iyo taxaddarrada daroogada;
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa xasaasiyad ku yeelan kara maaddada lorcaserin
Haweenka uurka leh iyo hooyooyinka naas nuujinaya waa inaysan maamulin lorcaserin maadaama ay saameyn ku yeelan karto ilmaha
Dheeraadku wuxuu la macaamili karaa qaar ka mid ah daawooyinka dhakhtarku qoro iyo kuwa aan dhakhtar qorin waxayna faragelinayaan guryaha dawooyinka
Daawada miisaanka luminta ee 'Lorcaserin' waa mid aan loo dulqaadan karin bukaannada u nugul kansarka ama kuwa horeyba u xanuunsada
Ayaa Isticmaali Kara Lorcaserin?
Lorcaserin waa daaweyn ahaan faa'iido leh daaweynta buurnaanta. Marka loo eego qawaaniinta FDA, daawadan serotonergic waxay kaliya ku habboon tahay dadka miisaanka culus oo leh BMI ka badan 27kg / m2 iyo dadka waaweyn ee cayilan ee leh BMI ka weyn 30kg / m2. Si kastaba ha noqotee, rijeetada waxay u shaqeyneysaa oo keliya bukaanka qaba xaaladaha miisaanka la xiriira sida dyslipidemia, dhiig karka, cudurada wadnaha, iyo dhiig karka.
Kaliya bukaanada qaangaarka ah ayaa sameyn kara lorcaserin inay iibsadaan maareynta culeyska daba dheeraada. Kala sooc tijaabooyinka tijaabada ah ee daawada ayaa xaqiijinaya in maadooyinka aadanaha ay ka sarreeyeen 18 sano. Waxaa intaa dheer, ammaankiisa iyo waxtarkiisa bukaannada ka yar 18 sano lama xaqiijin.
In kasta oo qof weyn oo cayilan ama culeyskiisu culus yahay uu isticmaali karo dheellitirka miisaanka lorcaserin, haddana waxaa jira waxyaabo diidmo u ah kooxo yar. Tusaale ahaan, haweenka uurka lihi su'aal kama taagna. Ka sokow, ma cadda in daroogadu ay dhex marto caanaha naaska, sidaa awgeed, hooyooyinka nuujinaya ayaa laga reebay inay qaataan.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Lorcaserin, Cetilistat, iyo Orlistat?
Lorcaserin HCl waa cunno-xakameyn halka liistada iyo cetilistat ay dib u dhigayaan harolysis-ka triglycerides ee asiidh dufan la nuugi karo. Dheeraadku wuxuu bartilmaameedsanayaa gobolka hypothalamic ee maskaxda ee xakameeya rabitaanka cuntada iyo dhererka. Qaadashada lorcaserin waxay bilaabi doontaa dhereg waxayna u muujineysaa jirka inaad buuxdo iyadoo aan loo eegin qaddarka yar ee aad qaadatay. Sidaa darteed, culeyska miisaanka ayaa bilaabanaya sababtoo ah hoos u dhaca qaadashada cuntada iyo ka leexashada cuntada.
Marka loo yaqaan 'lorcaserin', bukaan cayilan ayaa lumin kara wax ka badan 5% culeyskooda jirka ee bilowga ah iyo hoos u dhigista cabirka dhexda oo ku saabsan 3cm. Daawada waxay muujineysaa isbeddello muhiim ah marka loo eego marka la isticmaalayo liiska.
Sannadkii 2012, lorcaserin hydrochloride wuxuu ku guuleystay oggolaanshaha FDA wuxuuna noqday dawo qoris loogu talagalay buurnida iyo isku-buuqsanaanta miisaanka la xiriira. Si kastaba ha noqotee, Hay'adda Federaalka ayaa uga saartay suuqa sababo la xiriira kororka horumarka kansarka ee adeegsadayaashiisa.
Sida lorcaserin (Belviq), cetilistat waa daawo ka hortagga buurnida. Qaadashada daroogada ayaa xannibaysa xayrta xammeetida ganaca, kuwaas oo mas'uul ka ah jabinta triglycerides. Natiija ahaan, triglycerides ayaan ku shubi doonin aashitada dufanka ee bilaashka ah si ay si fiican jidhka ugu nuugto. Sidaa darteed, dufanka ayaa laga soo saari doonaa undigested.
Cetilistat waxay u horseedi kartaa hoos u dhac ilaa 10% miisaanka jirka iyo hoos u dhac weyn oo ku yimaada wareega dhexda.
Si ka duwan waxyeelada lorcaserin, calaamadaha xun ee cetilistat badanaa waxay la xiriiraan dheefshiidka. Tusaale ahaan, qofku wuxuu la kulmi doonaa saxaro saliideed iyo dabacsan, xaaska, caloosha oo soo noqnoqota, ama saxarada oo saxaroota.
Cetilistat weli kuma guuleysan oggolaanshaha FDA maxaa yeelay waxay hadda ku jirtaa wejiyada hore ee daraasaadka aadanaha. Ilaa hadda, kaabista ayaa leh natiijooyin rajo leh. Isbarbardhigga u dhexeeya tirakoobka bukaan-eegtada ee cetilistat iyo orlistat wuxuu caddeeyay in tii hore ay si weyn u dedejiso miisaanka oo ay u dulqaadasho fiican tahay.
Ku darsiga 'cetilistat' waa inuusan ku dhaqmin enzymes-ka kale ee caloosha iyo nidaamka neerfaha. Xaqiiqadani waxay sharraxaysaa sababta ay u leedahay falcelinno diidmo oo yar.
Lorcaserin iyo liistada labadaba waxay ka caawiyaan miisaanka oo yaraada. Si kastaba ha noqotee, habka ay u shaqeeyaan ayaa ku kala duwan.
Sida cetilistat, Orlistat waxay si ku meelgaar ah u joojineysaa lipases-ka caloosha iyo ganaca. Xakamayntaani waxay faragalin ku sameysaa hydrolysis-ka triglycerides ee qofka cunnadiisa, sidaa darteed, dhammaan dufanka la nuugo ayaa laga soo qaadaa isbeddel la'aan.
Marka loo eego tijaabooyinka caafimaad ee la heli karo, maadooyinka bani'aadamka ayaa miisaanka si dhakhso leh u dhimi kara inta ay isticmaalayaan ama liiska marka loo eego kuwa ku jira placebo. Dhamaadka lixda bilood, waxaa jiri doona isbeddelo muuqda oo ku saabsan wareegga dhexda. Ka sokow, qaadashada daroogadu waxay yareyneysaa cadaadiska dhiigga iyo dhacdooyinka cudurka macaanka ee nooca II.
Orlistat waa nooc kale oo lorcaserin ah oo loo heli karo daawo qoro oo loogu talagalay daaweynta buurnaanta laakiin waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa miiska dukaanka. Si ka duwan lorcaserin, dawadani wali waxay ku jirtaa liiska caddaanka ee FDA. Gobollada badankood waxay iibin doonaan kaabista iyadoon loo baahnayn warqad dhakhtar oo sax ah. Tusaale ahaan, tusaale ahaan, Mareykanka, Midowga Yurub, iyo Ustaraaliya, iibsashada liiska waa u fududahay sida bixinta kabaha isboortiga. Orlistat wax saameyn ah kuma lahan enzymes-ka kale ee 'GIT' ama nidaamka neerfaha.
In macmiil ah
Cetilistat iyo liiska waa lorcaserin loogu talagalay daaweynta culeyska iyo cayilka. Si kastaba ha noqotee, waxtarkoodu wuxuu kordhin doonaa oo keliya waxqabadyada jirka iyo cunnada kalooriga ku yar. Lorcaserin iyo liistada waxay yareeyaan miisaanka iyo cabirka dhexda laakiin joojinta qaadashadooda waxay ka dhigeysaa isticmaalaha inuu dib u helo ilaa 35% wixii ay lumiyeen.
Illaa iyo hadda, waa kaliya kaabista Cetilistat ee aan ka gaarin US FDA whitelist maadaama ay weli ku jirto tijaabooyinka bukaan socodka. Sida liiska, helitaankeedu wuxuu la mid yahay iibsashada paracetamol-kaaga caadiga ah. Liddi ku ah, sameynta iibka lorcaserin waa wax aan macquul aheyn tan iyo markii Wakaaladda Federaalka Mareykanka ay baabi'isay ansixinteeda horaantii 2020.
Dhamaan seddexda daroogo waxay u shaqeeyaan si hufan laakiin cetilistat waxay leedahay natiijooyin muuqda. Ka sokow, waxay leedahay waxyeelo yar oo si fiican loogu dulqaato jirka.
Xagee laga iibsadaa Lorcaserin iyo dhexdhexaadiyaasheeda?
Waxaad ka sameyn kartaa lorcaserin iibso dukaamada internetka. Budada ayaa loo heli karaa jumlad ahaan cilmi baarayaasha iyo falanqeeyayaasha. Marka ujeeddadaadu tahay inaad lumiso rodol dheeri ah cayilka awgiis, waad iska hubin kartaa lorcaserin iibka khadka tooska ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan kartaa dawo qoro sababtoo ah tilmaamaha adag ee FDA.
Haddii aad raadineyso lorcaserin ama dhexdhexaadiyaasheeda, waa inaad iska hubisaa CMOAPI si loo helo adeegyo sax ah oo alaab saafi ah. Xeryahayagu waxay soo mareen hubin tayo leh.
Sideen u qaataa belviq natiijooyinka ugu fiican?
Kiniinka la sii dheereeyey liq oo ha burburin, calalin, ama kala jebin. Waad qaadan kartaa Belviq cunto ama la'aan. Waa inaad lumisaa ugu yaraan 5% culeyskaaga bilowga inta lagu jiro 12-ka toddobaad ee ugu horreeya qaadashada Belviq iyo cunista cunto kalooriyeedu hooseeyo.
Immisa miisaan ayaad ku waayi kartaa belviq?
Lorcaserin, oo loo isticmaalo isku-darka cuntada iyo jimicsiga, waxay keenaysaa miisaanka oo yaraada oo ku saabsan 12.9 lb (5.8 kg) marka la barbar dhigo 5.6 lb (2.5 kg) oo leh placebo.
Mudo intee leeg ayaad qaadanaysaa belviq?
Waad qaadan kartaa Belviq cunto ama la'aan. Waa inaad lumisaa ugu yaraan 5% culeyskaaga bilowga inta lagu jiro 12-ka toddobaad ee ugu horreeya qaadashada Belviq iyo cunista cunto kalooriyeedu hooseeyo. Wac dhakhtarkaaga haddii aadan lumin ugu yaraan 5% miisaankaaga bilowga ah ka dib markaad daawada qaadato 12 toddobaad.
Sidee belviq kuu dareensiisaa?
Belviq waxaa loo yaqaan seertonin 2C agonist receptor agonist, taas oo macnaheedu yahay inay dhaqaajineyso qaybo gaar ah oo maskaxdaada ah oo kaa dhigaya inaad dareento buuxda. Gaajada oo yaraata waxay keentaa cunno yaraan, taas oo keenta miisaanka oo yaraada.
Waa maxay waxyeelooyinka lorcaserin?
Dhibaatooyinka ay keento Belviq waxaa ka mid ah: sonkorta dhiigga oo hooseysa (hypoglycemia), dhibaatooyinka maskaxda, garaaca wadnaha oo gaabiya, madax xanuun, wareer, lulmo, dareemid daal, daal,
Ma cabbi kartaa aalkolo inta aad qaadaneyso belviq?
Dhammaan miisaanka miisaanka luminta ma la falgalaan khamriga? Daawooyinka miisaanka oo dhami ma wada yeeshaan is-dhexgalka daroogada ee khamriga; tusaale ahaan, lorcaserin (Belviq, Belviq XR) iyo orlistat (Alli, Xenical) kuma qorna isdhexgalka daroogada khamriga ee calaamadeynta alaabtooda.
Belviq miyuu keeni karaa koror miisaan?
Natiijooyinka caato ah. Dadka qaata daroogada muddo hal sano ah waxay filan karaan inay lumiyaan boqolkiiba 3 illaa 3.7 boqolkiiba miisaankooda, waxaana laga yaabaa inay culeyska dib u helaan, cilmi baaris ayaa soo jeedinaysa. Hal tijaabo, bukaanada qaata Belviq waxay lumiyeen ilaa 5 boqolkiiba culeyska jirkooda kadib 12 bilood, laakiin waxay dib u heleen 25 boqolkiiba dhamaadka sanadka labaad.
Kee baa fiican qandaraas ama belviq?
Belviq iyo Contrave waxay ka tirsan yihiin fasalo dawooyin kala duwan. Belviq waa serotonin 2C agonist receptor iyo Contrave waa isku darka opioid antagonist iyo antidepressant.
Belviq run ahaantii ma shaqeeyaa?
Dadka qaata daroogada muddo hal sano ah waxay filan karaan inay lumiyaan boqolkiiba 3 ilaa 3.7 miisaankooda
Belviq ma la mid yahay Phentermine?
Belviq (lorcaserin hydrochloride) iyo Adipex-P (phentermine) waxaa loo isticmaalaa maareynta culeyska bukaanka buuran marka lagu daro cuntada iyo jimicsiga. Belviq waxaa loo isticmaalaa maareynta miisaanka joogtada ah.
Belviq ma la joojiyay?
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) ayaa codsaday in soo-saaraha Belviq, Belviq XR (lorcaserin) uu si iskood ah ugala noqdo daawada miisaanka lumisa suuqa Mareykanka.
Taylor, J., Dietrich, E., iyo Powell, J. (2013). Lorcaserin ee Maareynta Miisaanka. Sonkorowga, Cudurka Dheef-shiid kiimikaadka, iyo Cayilka.
Hoy, SM (2013). Lorcaserin: Dib u eegis ku saabsan Isticmaalkeeda ee Maareynta Culeyska Dabiiciga ah. Daroogada.
Hess, R., iyo Cross, LB (2013). Badbaadada iyo waxtarka Lorcaserin ee Maareynta Cayilka. Daawada Postgraduate.
Brashier, DB, Sharma, AK, Dahiya, N., and Singh, SK (2014). Lorcaserin: Dawo Nooc Cusub oo Daawasho Leh. Joornaalka Farmashiga & Farmashiyada.
Chan, EW et al. (2013). Wax-ku-oolnimada iyo Badbaadada Lorcaserin ee Dadka Waaweyn: Caymis Meta-ah oo 1-sano ah oo tijaabooyin la xakameynayo ah (RCTs) iyo Dib-u-eegis Sheeko ah oo ku saabsan Muddo Gaaban RCTs. Faallooyinka buurnida.
Nigro, SC, Luon, D., iyo Baker, WL (2013). Lorcaserin: Novel Serotonin 2C Agonist ee Daaweynta Cayilka. Cilmi-baarista Caafimaadka ee hadda iyo Fikradda.
No.27 Street Keyuan Street, Degmada Horumarinta Dhaqaalaha, Degmada Shanghe, Magaalada Jinan, Gobolka Shandong
Hadaad suaal qabto
fadlan kala xiriir at [emailka waa la ilaaliyay]
© 2020 cmoapi.com. Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay Afeef: Ma samaynayno wax sheegasho ah oo ku saabsan alaabooyinka lagu iibiyo degelkan. Ma jiro wax macluumaad ah oo laga bixiyay websaydhkan oo ay qiimeeyeen FDA ama MHRA. Macluumaad kasta oo lagu bixiyo websaydhkan waxaa loo bixiyaa sida ugu fiican ee aan ka ogaanno loomana jeedo in lagu beddelo talooyinka xirfadlayaal caafimaad oo takhasus leh. Shahaadooyin kasta ama dib u eegis wax soo saar ah oo ay bixiyaan macaamiisheenu ma ahan aragtida cmoapi.com waana inaan loo qaadan talo ahaan ama xaqiiqo ahaan.